I-Ascorutin: imiyalelo, izindawo zomuthi, imithetho yokwamukela
Isidakamizwa "i-Ascorutin" yisisidakamizwa esinezinto ezingenawo ama-angioprotective. Yenza ngcono ukucwiliswa kwemithi emincane, kuvame ukucubungula izinqubo ze-metabolic ezindongeni zemithambo yegazi futhi kunciphisa ukubonakala kwazo. I-Askorutin, imfundo equkethe incazelo eningiliziwe yezindawo zayo, ikhishwa efomini lethebhulethi. Ithebhulethi ngayinye iqukethe i-50 mg ye-rutin (isithako esisebenzayo - i-rutozide) ne- ascorbic acid (i-vitamin C). Ukuhlanganisa isimiso ngokulungiselela okulodwa nge-vitamin C akuyona ingozi: babamba iqhaza emisebenzini ye-redox eyenzeka emzimbeni.
U-Rutin igama elivamile leqembu lemifino (kunezinkulungwane ezingaphezu kwesigamu nengxenye), ngaphambilini ehlanganiswe igama elithi "vitamin R". Njengamanje zihlukaniswa njenge-flavonoids. U-Rutin akhiqizwa ngumzimba wedwa, ngakho-ke kubalulekile ukuwuthola ngaphandle. Emvelweni, itholakala kwezinye zezitshalo - isibonelo, emaqabunga e rue enomsindo. Ukuze uzuze ngesilinganiso sezimboni, sebenzisa ubukhulu obuhlaza obuncane bezinhlanzi kanye nezimbali zezinso ze- Japanese Sophora. Ngaphandle kokulungiswa "i-Ascorutin", imfundo ekhombisa izinkomba zokusetshenziswa kwayo ngokuningiliziwe, i-rutin ingxenye yamaphilisi afanayo kanye nejel for application yangaphandle "Venoruton".
Ukuntuleka kwesimiso emzimbeni kubonakala ngamancane, amaphuzu anjenge-hemorrhages - i-petechiae (kufaka phakathi i-retina), evela ku-fragility yama-capillaries. Ngaphezu kwalokho, ukukhathala okungapheli, ubuhlungu emilenzeni, okuvela ngesikhathi sokuhamba, kanye nezinsini zamagciwane nokugaya kungakhuluma ngokuntuleka kwakhe . Ukwamukelwa njalo kwezidakamizwa "I-Ascorutin" (imfundiso ithi ngakho) iveza umphumela ophawulekayo: izindonga zama-capillary ziqiniswa, ukwehluleka kwazo kunciphisa. Ngaphezu kwalokho, lesi sidakamizwa sithuthukisa i-vasodilation, kusiza ukuvimbela izinguquko ze-sclerotic kuzo futhi kuvumela ukucindezelwa kwegazi.
Kulezi ziguli ezinezinkinga ezingenangqondo, imithi ye-varicose kanye ne-thrombophlebitis engenangqondo , i- Ascorutin (imfundo ichaza umphumela wayo) iholela ekunciphiseni i-edema nobuhlungu, i-trophic disorders. Ngaphezu kwalokho, i-rutin efakwe ekubunjweni kwayo i-antioxidant futhi inephawu elibonakalayo eliphikisana nokuvuvukala, likhuthaza ukuqoqwa nokufaniswa kwe-ascorbic acid. Izifo nezimo ezihlukene, ezihambisana ne-fragility yama-capillary kanye nokunyuka kwazo okuphezulu (ukushisa komfutho wegazi, i-arachnoiditis, i-rheumatism, i-endocarditis ye-septic, i- diathesis eyingozi, i- capillarotoxicosis, nesimungumungwane nomswakama obomvu), ngokuvamile i- Ascorutin yezidakamizwa iphakanyiswa.
Izimpawu zokwamukelwa kwayo zihlanganisa ukunqotshwa kwama-capillari ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa ezihlanza igazi - i-anticoagulants (neodikumarina, njll). Ijelisi eliqukethe i-rutin "Venoruton" linciphisa kakhulu ubuhlungu nokuvuvukala ekulimazeni.
Isidakamizwa esihlanganisiwe "I-Ascorutin" ithathwa kuphela njengoba kunqunywe udokotela, ngokuvamile kuvame izikhathi ezingu-2-3 ngosuku, ithebhulethi eyodwa. Inkambo yamaviki angu-3-4, kuye ngesimo sesiguli. Thatha le mithi kuphela uma udla noma emva kokudla. Ukunakekela kufanele kuthathwe: ukusabela okwehlukile okubangelwa yi-hypersensitivity kuya ezingxenyeni zayo, kanye nekhanda kanye ne-dyspepsia - zonke lezi zimpawu zingabonakala ngesikhathi sokuphathwa kwe- Ascorutin yezidakamizwa . Ukungahambisani nokuvuma kwakhe - thrombophlebitis nokuthambekela kwe-thrombosis, isifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, njengezinye izidakamizwa eziningi, "i-Ascorutin" ayinqunyelwe ku-trimester yokuqala yokukhulelwa, futhi okwesibili nesithathu kunqunywe kuphela uma kunesidingo.
Isidakamizwa "Dioxydin": imfundo. In ampoules ukuhlushwa kwezinto kuyinto ephakeme
'Adaptol': ukubuyekezwa nezincomo
"Phlogenzyme": incwadi yokufundisa, imibono kadokotela. Imizwa ye "Phlogenzyme"
Amafutha ahlanzekile ezinyaweni ezivela ku-sweat and smell: igama, isithombe, intengo
Ama-Suppositories: ongakhetha kanjani (izinhlobo, imiyalelo nezibuyekezo). Amakhandlela Wokubeletha: Yikuphi Okukhethwa (Ukubuyekeza)
Waterpark e Esaulova (Krasnoyarsk): izithombe kanye nokubuyekeza
Ingabe Guinea izingulube ukunuka: ukubuyekezwa abanikazi
Inyama izinkukhu: zokupheka ngezithombe. Inyama French inkukhu fillet
Uchungechunge oluthi "Kwake kwathi ngo-Rostov": nabalingisi izindima
Thenga ijazi Sable nokuzizwa njengaye indlovukazi
FC Krasnodar Academy - one of the best ukuqeqeshwa elisekela eYurophu
Indlela ukuthola umsebenzi e Kiev, ngaphandle asebenzise ajwayeleke
Kanjani maynkraft portal emkhathini? Very simple!
Ama-antibiotic "Macropen" - imfundo manual iqukethe ulwazi olubalulekile
Isicathulo ku-cm futhi isithende ukuphakama
Lapho ukuphumula okuhle Bulgaria - izeluleko kusuka abahambi abanolwazi